Aleo misoroka izay azo sorohina | NewsMada
Aleo misoroka izay azo sorohina
Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, haintany. Ireo ny fahasahiranana manjo ny vahoaka amin’izao, vahaolana haingana sy maharitra. Tsy lavina, misy ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana, saingy mby amin’ny hoe tsy ren’izay vazan’aina, sanatria? Na fandio iray siny tsy mahaleo fandoto eran-tandroka… Isaky ny misy trangana tsy fandriampahalemana, ohatra, toy ny hoe tany tsy misy fanjakana ny fijerin’ny sasany izay hitany na reny; na misy ihany izany, fa tsy mahaleo ny ratsy.
Inona no azo atao sy ho vanona amin’izay fampandrosoana, raha tsy misy fandriampahalemana? Raha mbola azo atao, amin’ny lafiny rehetra izay: fandraharahana, fahasalamana, fanabeazana… Ao anatin’izany ny fitonian-tsaina: fahazoana antoka, ohatra, fa hitera-bokatra ho an’ny tena izay atao, hananana fahatokisan-tena ny ampitso… Ekena, anisan’ny manakorontan-tsaina ny isan-tokantrano, ohatra, ny fidangan’ny vidim-piainana tsy marin-toerana be ihany, saika miova araka ny toerana sy fotoana.
Manampy trotraka ny haintany. Na ny rano hosotroina aza, manahirana: andriana ilika amin’ny faritra sasany, iaretan-tory na ifohazana maraimbe. Vao mainka izay rano ho an’ny fiompiana, fambolena, taozavatra…. Andrasana sy antenain’ny maro ny fandrotsahana orana tsy voajanahary, fa aleo misy kely toy izay tsy misy mihitsy. Na izany aza, mampanahy be ihany ny taom-pamokarana tsy mandeha amin’ny laoniny amin’izany rehetra izany. Laingalainga, hanao ahoana ny fiainam-bahoaka atsy ho atsy?
Sanatria, hisy fipoahana na fikorontanana? Tsy misy maniry na mitetika izany, na ndeha hamendrofendro sy hampitahotra. Na tonga izany vao hihetsika? Ny amisavisana ny ratsy mba hiavian’ny soa. Aleo misoroka izay azo sorohina, indrindra izay efa tsinjotsinjo mialoha. Natao hitsinjo mialoha izay mety hitranga ny hoe mitondra. Matoky sy manantena ary miandry ny tomponandraikitra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga ny vahoaka, matoa mangina sy tsy mihetsika na ao anaty fahasahiranana sy miatrika ady aza.